China iziqhamo yemifuno ukusonga ikreyiti Ukwakha kunye Factory | Lonovae
Ii-Lonovae Plastic Turnover Crates zenzelwe ukuba zingasindi, zisongeke, zihlale ixesha elide, ziphinde zisebenze kwaye zibe noqoqosho, zinike isisombululo esifanelekileyo sokupakisha ukugcina, ukukhusela kunye nokuhambisa izinto ezixabisekileyo, ezibuthathaka, ezingangeni manzi okanye izinto (ezinje nge-elektroniki, izithambiso, iziqhamo kunye nesiselo kubasasazi, abathengisi kunye nabasebenzisi bokugqibela. Kulula ukuphatha, yonga indawo.
Igama lemveliso Iziqhamo zemifuno yokusonga ikreyiti-LN01
Ubukhulu 600 * 400 * 180mm
Igama lemveliso Iziqhamo zemifuno yokusonga ikreyiti-LN02
Ubukhulu 600 * 400 * 255mm
Ukuphakama okuphezulu kunye nokushisa okuphantsi
I-100% yempahla entsha ye-PP
Yithi chu ngokufaka endaweni yokupakisha kwendabuko
Ixabiso lobuso kunye nembalelwano yangaphakathi
Ukulahlwa kokupakishwa kwemveliso entsha kunemida emininzi kukungazinzi komthwalo kunye nokukhuselwa komthwalo okungalunganga okukhokelela ekonakaleni kwemveliso. Kwezinye iimeko ukupakishwa kwemveliso yesintu kungakhokelela kumanqanaba omonakalo aphezulu njenge-4% ngelixa i-Lonovae ikreyiti esongekayo yehlisa eli nqanaba ukuya kwi-0.1%. Uphuculo olubonakalayo kumgangatho wemveliso kunye nenzuzo yomthengisi.
Ukuchasana kobushushu obuphezulu be-65 ° C, akukho deformation okanye ukunyibilika.
Ukuxhathisa kubushushu obuphantsi -18 ° C, hayi ukukhubazeka kwaye kungabi buthathaka.
Iphinde yenziwa ngokutsha kwindawo yokugcina izinto efrijini okanye kwikhonkco elibandayo, ayithambekele ekukhuleni nasekuluphaleni. Ukuba imdaka, ungasebenzisa ukuhlamba umpu ukuze ufumane inkangeleko entsha. Xa kuthelekiswa neebhokisi, ukusetyenziswa kwexesha elide kungaphantsi, kwaye umhlwa unokuncitshiswa ngokufanelekileyo, kwaye ixesha lokusebenzisa lide kuneminyaka emi-3 ukuya kwemi-5.
Iibhokisi ezisongelayo zinezibonelelo zobunzima bokukhanya, indawo encinci yonyawo kunye nendibano efanelekileyo. Zisetyenziswe ngokubanzi kwiinkqubo zokuhanjiswa kwe-loop ezinje ngeevenkile ezinkulu, iivenkile ezilula kunye namaziko okusasaza amakhulu.
Emva kokuba usongelwe, ivolumu iyacuthwa ngaphezulu kwama-75%, kwaye inezibonelelo zobunzima bokukhanya, indawo encinci, kunye nokudibanisa okufanelekileyo. Ibikwimixokelelwane enkulu Isetyenziswa ngokubanzi kwiinkqubo zokuhanjiswa kwe-loop ezivaliweyo ezinjengeevenkile ezinkulu, iivenkile ezilula kunye namaziko amakhulu okusasaza.
Ifama ukuya kwiTafile
Isisombululo sokupakisha esitsha
I-Lonovae ine-self-development, imveliso yokubumba kunye nenaliti yokuvelisa imveliso.
Egqithileyo Alahlwayo Kitchen Ukucoca ithawula
Okulandelayo: Ukusonga ikreyiti